Axmed Madoobe & wakiilka QM ee Somalia oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Kismaayo – Banaadir weyne
Axmed Madoobe & wakiilka QM ee Somalia oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Kismaayo
Kismaayo – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta Aqalka Martida ee Magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo xubno la socday.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in kulanka lagaga hadlay guud ahaan Siyaasada Soomaaliya halka ay marayso iyo si gaar ah Arimaha Doorashooyinka Jubbaland. Madaxweynahu wuxuu sheegay inay isku raaceen in waxa wadanka lagu kala hagi karo uu yahay dastuurka dalka u yaala oo lagu dhaqmo mar uu ka hadlayay arimaha doorashooyinkana wuxuu sheegay in la isku raacay in Arimahaas looga dambaynayo gudiga doorashooyinka iyo odayaasha dhaqanka.
Madaxweynahu wuxuu intaas ku daray in goobta ay ka dhacayso doorashada iyo amnigeedaba la isku raacay in ay tahay masuuliyad u taala Jubbaland, iyadoo arrintan ay ka hor imaneyso habraacii doorashada Jubbaland ee dhowaan ka soo baxay Wasaarada arrimaha gudaha Soomaaliya ee ahaa doorashada lagu qabto xarunta QM ee Kismaayo ama akademiyada Booliska magaaladaas.
Danjiraha Qaramada Midoobay ayaa dhankiisa ka mahad celiyay sida loo soo dhaweeyay, waxaana uu Jubbaland uga Tacsiyeeyay weerarkii lagu qaaday Hotel Madiina waxaa Safiirku uu sheegay in Qaramada Midoobay ay garab taagan tahay Dowlada iyo shacabka Jubbaland oo xanuunka ay la qabsanayso.
Waxaa uu intaas ku daray in ay doonayaan in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo aan meela laga faragalin isla markana masuuliyadeeda ay leedahay Dowlad Goboleedka Jubbaland wuxuu xusay in uu sidoo kale uu la kulmay gudiga doorashooyinka Jubbaland iyo Xildhibaanada laga soo doorto Jubbaland ee Baarlamaanka Federaalka ah oo uu aragtidooda ka dhagaystay. – All Banaadir News